Dreams Khabar सहनजिको पराजयमा सबै भन्दा बढी म रोएको थिएंँ : राजु श्रेष्ठ
सहनजिको पराजयमा सबै भन्दा बढी म रोएको थिएंँ : राजु श्रेष्ठ
उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनको चुनाव यही ३० गते हुदैछ । चुनाव नजिकिदै गर्दा मौसम चिसिएपनि चुनावी माओल तातेको छ । संघको अहिले हुन गईरहेको ५१ औ साधारण सभा एवं अधिबेशनमा प्यानलनै बनाएर राजु श्रेष्ठ र सहनलाल प्रधान चुनावमा होमिएका छन । राजु श्रेष्ठ बर्तमान कार्यसमितिका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन भने प्रधान पुर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन । आसन्न संघको निर्वाचनमा केन्द्रीत रहेर आफ्ना योजना, एजेण्डा तथा उवासंघका समस्या, समाधानका बिषयमा रहेर अध्यक्ष पदका प्रत्यासी राजु श्रेष्ठसंग गरिएको कुराकानी
तपाई अध्यक्ष पदमा लड्दै हुनुहुन्छ । अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि हो तपाई । तपाईँका एजेण्डा के-के हुन् ?
देशमा संविधान कार्यन्वयनको लागि तिनवटै तहको निर्वाचन भैसकेको छ । त्यसैले देशको संघीय संरचनामा गईरहेको अवस्थामा प्रदेशले गर्ने नीति अनुसार अगाडी बढ्नुपर्ने हुन्छ। भोलिका दिनमा कस्तो औद्योगिक नीति , कस्तो व्यवसायिक नीति आउने हो सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्ने हुनछ। यसका लागि हामी आर्थिक रुपान्तरण, आर्थिक का्रन्तिमै जानुपर्छ । अर्को कुरा चितवन जिल्ला एउटा आर्थिक हव हुने संभावना पनि उत्तिकै छ । यस्तै चितवननै ओद्योगिक क्षेत्र निर्माण प्रक्रियामा छ । ,यसैलाई नै मेरो मुख्य एजेण्डा बनाई महानगरको ट्राफिक व्यवस्थापन, ट्राफिक, व्यवस्थपान , फुटपाथ व्यापारी, लगायत यहांंँको स्थानीय सरकारसंग समन्वय गर्दै अगाडि बढ्ने पनि मेरो लक्ष्य हो ।
तपाईलाई नै चि उवासंघको नेतृत्वको जिम्मा दिनुपर्ने किन ?
मैले अहिले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा छु , म यो पदमा त्यसै आएको होइन , मेरो १० बर्षको लगाव, मेहनत , लगानी छ । अहिलेसम्म आईपुग्दा मैले धेरै अनुभव प्राप्त गरेको छु । जसले गर्दा मैले आम व्यवसायीको समस्या, नजिकबाट बुझेको छु । चितवनको विकासका लागि केके े पूर्वाधार चाहिन्छन, केके समस्या , चुनौति छन यी सबैको समाधान गर्ने ममा स्पष्ट खाकाहरु छन । बिभिन्न सरकारी तथा नीीज संघसंस्थाहरुसंग मिलेर नजिकबाट काम गर्ने अवसर पाएको छु । जसका कारणपनि मैले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी पूर्ण रुपमा निभाउन सक्छु भन्ने आत्म विश्वास छ । त्यसैले गर्दा पनि स्वभाविक रुपमा उवासंघको नेतृत्व मलाई नै दिइनुपर्छ । मलाई लाग्छ उवासंघ चितवनलाई मेरो अभाव खड्केको छ ।
पछिल्लो समयमा आएर संघमा एकता भन्दा पनि विभाजन र गुटवन्दी हावी भयो भनिन्छ । सबैलाई सँगै मिलाएर लाने तपाईको योजना कस्तो छ ?
उवासंघ, चितवन झण्डै ५७ बर्षको ईतिहास वोकेको संस्था हो , यस संस्थामा पूर्व अध्यक्ष एवं अग्रज पदाधिकारी हरुको मेहनत तथा पसिना भिजेको छ । जसरी यो भवन तथा पूर्वाधारको लागि उहांँहरुको योगदान ठूलो छ । तर अहिलेसम्मको कार्यकालमा कहीं कतै मतैक्यता हुनु स्वभाविक हो । तर त्यस्तो बिभाजन तथा गुटबन्धी नै छ भनेर म भन्दिन , यहांँ धेरैका विचार एउटै नहुन सक्छन, फरक फरक विचारधारालाई सम्मान र आदर गर्न पर्ने समय आएको छ । यद्यपी अवपनि हामी बिभाजन र गुटबन्धीमा अल्झियौं भने उद्योग वाणिज्य संघको गरिमा मा आंँच पुग्छ । अर्को कुरा देशले समेत एउटा राजनैतिक स्थायित्व पाईरहेको बेला हामीले दल , गुट, बिभाजन भन्दा माथि उठेर आर्थिक समृद्धि तिर अगाडी बढ्नु पर्छ । तयसको लागि मसंग यस्ता समस्यासंग ट्याकल गर्ने क्षमता छ । म अध्यक्षमा निर्वाचीत भए भने पक्कै संघको गरिमालाई उच्च पार्ने काम गर्छु । मेरो यो प्रण नै हो ।
चिउवा संघलाइृ चिनाउने चितवन महोत्सव वाहेक संघले उल्लेख्य काम अगाडि ल्याउन सकेन भनेर भनिन्छ तपाई वरिष्ट उपाध्यक्ष पनि भैसक्नु भयो । तपाईले उक्त पदमा निभाएका जिम्मेवारी र सफलताबारे के भन्नु हुन्छ ?
चि उ वा संघले एउटा ठूलो आम्दानी को रुपमा चितवन महोत्सव संचालन गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय रुपमा चितवन महोत्सवको चर्चा छ । यो एउटा चितवनको चिनारी पनि हो ।उवासंघको आर्थिक पक्ष बलियो बनाउन र यहांँ भएका स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने एवं प्रर्वद्धन गर्ने हिसाबले पनि यो एउटा प्लेटफर्म हो । तर यो संगै म मेरो कार्यकालमा रहंँदै गर्दा हामीले उद्योग वाणिज्य संघको सदस्यता संख्यामा बृद्धि गरी झण्डै ३४०० को हाराहारीमा पुरयाउन सफल भएका छौ। यो पनि एउटा उपलब्धी नै हो । म आफू वरिष्ठ उपाध्यक्षमा रहंँदे गर्दा यहांँ रहेका फेन्सी व्यवसायी , तरकारी व्यवसायी, एवं होटल व्यवसायीका समस्याहरु पनि हल गरेको छु। म दिन रात नभनी उनीहरुको पक्षमा लडेको छु । जुन कुरा लक्ष्मी नारायण वस्त्रालयलयको समस्या, तरकारी मण्डीको व्यवस्थापन लगायत अन्य व्यवसायीको समस्यामा आफू प्रत्यक्ष रुपमा रही समस्या समाधान गरेको छु । यस्तै उद्योग वाणिज्य संघले सरकारी तथा ग्रैह सरकारी संस्था एवं नीजि संघ संस्था संँग मिली थुप्रै सामाजिक काम गरेको छ । मेरै कार्यकालमा हामीले आन्तरीक राजश्व कार्यालय र उद्योग वाणिज्य महासंघबाट एक्सेलेन्सी अवार्ड पाईसेका छौ. म दाबीका साथ भन्न सक्छु अघिल्ला कार्यकालमा भन्दा हामीले धेरै काम गरेका छौं
चितवनलाई आर्थिक रुपमा समृद्ध जिल्ला बनाउने अभियानका क्रममा तपाई यदि अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो भने तपाईले खेल्ने भूमिका यस अघिका अध्यक्षहरुको भन्दा भिन्न कस्तो रहने छ ?
निश्चित रुपमा म संग उवासंघको चितवनको अध्यक्षमा निर्वाचीत भए भने , लेखेर राख्नुस यी कुराहरु गरेरै छोड्छु। सबैभन्दा पहिला चितवनमा रहेका बढी पर्यटनको प्रचुर संभावना भएको क्षेत्रहरु छन । तर ती स्थानहरुहरु ओझेलमा परेका छन ।े ती पर्यटकीय गन्तव्य स्थानहरुको प्रर्वद्धन नभएको अवस्था छ । त्यसैले देशकै केन्द्र विन्दु रहेको चितवनका रहेका पर्यटन संभावना रहेका स्थानहरुलाई राष्ट्रिय तथा एवं अन्र्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा यसको प्रचार प्रसार एवं प्रर्वद्धनको लागि यससंग आवद्ध रहेका बिज्ञ एवं परामर्शदाता संग समन्वय गरी यसलाई देशकै उत्कृष्ट गन्तव्य स्थल बनाउने मेरो पहिलो प्राथमिकता रहने छ। यस्तै चितवन एउटा उर्वरभूमि हो तर अझै पनि यहांँ परम्परागत रुपमै खेती हुने गरेको छ । यो क्षेत्रपनि अर्थतन्त्रको वलियो आधार हो त्यसको लागि कृषिमा आधुनिकीकरण आबश्यक छ । त्यसैले यसको लागि सम्बन्धित निकाय एवं महानगरसंग समन्वय गरी यस क्षेत्रको विकासको लागि पहल गर्नेछु। यस्तै सरकारको तीन खम्बे नीति अनुसार र अवधारणलाई आत्मसात गरी सोही अनुसार अगाडी बढ्नेछु । त्यसैले पहिलेका अध्यक्षहरुभन्दा पृथक हिसाबले काम गर्ने मेरा योजना छन। मैले अहिलेको समयको माग एवं आम व्यवसायी उवं चितवनने चाहेको स्मार्टसीटीको बनाउन म लागि पर्दछु ।
अहिले देश संघीयतामा गै सकेको अवस्थामा स्थानीय उद्योगी व्यवसायीहरु र स्थानीय सरकारबीचको सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउने योजना छ ?
देशसंघीय संरचनामा गइरहेको र राजनितीले पनि स्थायीत्व पाईरहेको छ र संविधान कार्यन्वयन गर्ने चरणमा छ । अव सरकारले प्रदेशको लागि कस्तो अर्थनीीत तय गर्दछ । निश्चयनै देशलाई समृद्धतिर उन्मुख गराउनको लागि देशको अर्थनीतिले हामी आम उद्योगी व्यवसायीले कसरी समेट्छ , सोही अनुसार स्थानीय सरकार एव. प्रदेशसंग समन्वय गरी व्यवसायी एवं उद्योगीमैत्री कर नीतिको लागि मेरो प्रयास हुनेछ । यी सबै काम जति कार्यन्वयन गर्न ग्राहो छ त्यीतकै चुनौती र अप्ठ्यारा छन । यसका बाबजुद बिभिन्न यससँग सरकार राख्ने सरोकारवालासां परामर्श र सहकार्य एव. समन्वय गरी अगाडि बढ्ने मेरो योजना छ ।
व्यवसायीले कर तिरेनन् भने प्रदेश र स्थानीय सरकार चल्दैनन् । सरकारी राजश्व संकलनमा व्यवसायीहरुको सहयोग र सहकार्यका लागि तपाईले खेल्ने भूमिका के हुनेछ ?
यसको लागि आम उद्योग व्यवसायीहरु करको दायरामा आउनैपर्छ । जसको लागि सरकारको कर नीति करमैत्री हुनुपर्छ । कर डरले होइन रहरले तिर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ । हामीले तिरेकै करबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारका विकास निर्माणका कार्य हुदा व्यवसायी पनि यसतर्फ सजक हुनुपर्छ । त्यसैले नीजि संस्था र सरकारसंग सहकार्य गरी करको दायरालाई फराकिलो बनाई आम व्यवसायीलाई करतिर्ने वातावरण सिर्जना गर्न म अग्रसर हुनेछु ।
आर्थिक विकासका कार्यक्रमबाहेक उद्योगी व्यवसायीको हक हित र एकताका लागि संघले आगामि दिनमा खेल्ने भूमिका कस्तो हुन्छ ?
उद्योग वाणिज्य संघमा पनि अहिले ३० वटा बस्तुगत संघहरु छन । यिनीहरलाई स्थापीत गरी , आगामी दिन बस्तुगका व्यवसायीहरुको समृद्धिको लागि बिशेष योजना लिएर अगाडी बढछु । जसले गर्दा सबै उद्योग व्यवसायीहरुको भावनामत्क सम्बन्ध स्थापित हुन्छ ।र व्यवसायीहरु बीच एकता पनि बलियो हुन्छ । त्यसैले अहिले आवश्यकता बस्तुगत व्यवसायीहरलाई समेत समेटेर अगाडी बढ्ने योजना मेरो छ ।
उवासंघ आफ्नै संस्थागत क्षमता र विकासका लागि सचिवालयलाई मजवुद बनाउने तपाईका योजना के के छन् ?
उवासंघ, चितवनको संस्थागत र विकासका लागि हामीमा जवाफदेहिता हुनुपर्छ । अघिल्ला कार्यकालमा सबै कार्यसमितले काम गर्नुपर्ने अवस्था थियो अहिले कार्यसमितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष र सदस्यहरु मात्र राखेका छौ. किनकी हामी उद्योग वाणिज्य संघमा रहंँदै गर्दा अर्को तिर हामी आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन पनि व्यस्त हुनु पर्छ । त्यसैले अवका दिनमा संघका सचिवालयका कर्मचारीहरलाई तालिम तथा क्ष्मता अभिबृद्धि गर्ने खालका तालिम हरु दिएर र प्रत्येक बिषय तथा क्षेत्रको अनुभव हुने गरी उनीहरुलाई दक्ष, क्षमतावान बनाउने काम गर्छु । जसले गर्दा संघका अन्य आर्थिक क्रियाकलाप तथा योजना तथा विकासका काम लगायत कामहरु चुरुत दुरुस्त र पारदर्शी हुन सकोस।
अन्त्यमा, तपाई र सहनलाल प्रधान बच्चा बेलाको पनि साथी हुनुन्छ, यस भन्दा अगाडिको कार्यकालमा पनि तपाई प्रधानकै प्यालनबाट जित्नु भयो । सहन जीको लागि तपाईले यसपटक उहांँलाई अध्यक्ष पद छोडीदिएर उहांँको लागि तपाईले मार्ग प्रशस्त गरिदिदा के हुन्छ? यस सम्बन्धी तपाईको धारणा के छ ?
हामी सानैदेखिको साथी हामी संगे खेल्ने संगै , हिड्ने गरेको साथी हौं। म अहिले म वरिष्ठ अध्यक्ष उपाध्यक्ष हुदै गर्दा मेरो आखिर गन्तव्य अध्यक्ष हो । तर अध्यक्ष पदमा आकांक्षी हुन स्वभाविक होला , जहांसम्म उहांँको विचार जो छ , उहांँले पनि मेरो लागि एउटा असल साथीको लागि ठुलो बिचार लिएर , एउटा फराकिलो मन लिएर यसपटक मलाई सहयोग गर्नुहुनछ भन्ने विश्वास लिएको छु । किनकी अघिल्लो चुनाव मा मैले जति सहयोग कसले गर्यो होला उहांँलाई ? तर नतिजा फरक पर्न गयो । यो सबै उहांँलाई थाहा छ । यतिसम्मकी उहांँको हारमा सबै भन्दा बढी म रोएको थिए । त्यसैले यसपटक उहांँले मलाई बाटो खोलिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ ।